Maraykanka, 20 November 2018
Talaado 20 November 2018
Trump: Ma dhageysan doono codka dilka Khaashuqji
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in warbixin laga siiyey cajalad maqal ah oo laga duubay dilka suxufigii Sacuudiga Jamal Khaashuqji loogu gaystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Isnatbul, balse uusan dooneyn inuu dhageysto.
C/raxmaan Kaahin oo ka Tala Bixinaya Dhismaha Maamulka Minnesota
Guddoomiyaha la doortey ee gobolka Minesota​, Tim Walz, ayaa hadda ku guda jira dadaallada uu ku soo xulanayo xubnaha maamulkiisa cusub.
CIA oo Rumeysan in Ben Salman uu Amray Dilka Khashoggi
Hey’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay inay rumaysantahay in dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan uu bixiyay amarka lagu dilay weriye Jamaal Kaashugji, sida laga baahiyay warbaahinta Mareykanka.
Mareykanka oo cunaqabateyn saaray shaqsiyaad Sacuudi ah
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 qof oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaasi oo lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen dilka suxufi Jamaal Khaashuqji.
Tirada dadka ku dhintay dabka California oo korortay
Muhaajiriin soo garay xadka Mareykanka
44 ku dhimatay dab ka socda California
Kumannaan ka mid ah shaqaalaha dabdamiska Mareykanka ayaa la tacaalaya dab xoog leh oo ka ololaya qeybo ka mid ah koofurta iyo waqooyiga gobolka California.
Dagaalka Mareykanka ee argagixisada oo dilay nus milyan qof
Daraasad la baahiyey Khamiistii ayaa sheegtay in dagaalka Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka ah argagixisada uu dad dhan nus milyan qof ku dilay dalalka Afghanistan, Iraq iyo Pakistan, 17-kii sano ee tegay.
Xaalad deg deg ah oo looga dhawaaqay California
Xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay qeybta waqooyi ee gobolka California kaddib markii uu dab xoog badani baabi’yay deegano ku yaallo dhinaca waqooyi.
California: Toogasho dad badan lagu dilay
Mas’uuliyiinta gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhinteen toogasho habeenkii arbacada ka dhacday baar lagu caweeyo.
Trump oo xilka ka qaaday Jeff Sessions
Madaxweynaha Maraykanka Dondld Trump ayaa Arbacadii shalay xilkii ka qaaday Xeer Ilaaliyihii guud ee Maraykanka Jeff Session.
Ilhaan Cumar oo ka mid noqotay Congress-ka Mareykanka
Ilhan Cumar, ayaa ka mid noqoneysa Aqalka Hoose ee Congress-ka Maraykanka, ayadoo noqon doonta qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee sidaas sameeya.